XOG; Walaalka Marxuum Cabaasi Siraaji oo si fudud ugu guuleystay Kursiga Xildhibaanimo & Wasiir u tanaasulay – Marqaanmedia24.com
XOG; Walaalka Marxuum Cabaasi Siraaji oo si fudud ugu guuleystay Kursiga Xildhibaanimo & Wasiir u tanaasulay
Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa tartanka Kursiga Xildhibaannimo ee uu ka geeriyooday Alle ha u naxariistee Cabaasi Siraaji oo la filayo in maalinta berito ah ka dhacdo magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ah maamulka Jubbaland.
Wararka laga helayoa Magaalada Kismaayo ee Xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in Wasiirka Howlaha Guud iyo Guryenta Soomaaliya uu ka tanaasulay u tartamida Xubin ka banaan Golaha Shacabka.
Khamiista Berito ah ayaa la filayay in ay Kismaayo ka dhacdo doorashado ay ku tartami lahaayeen Wasiir Saadaq C/llaahi Cabdi iyo Maxamuud Siraaji oo ah Walaalka Marxuum Cabaas Siraaji oo booskaasi ka geeriyooday.
War ay heshay Warqaad.com ayaa waxa ay sheegayaan in Wasiir Saadaq C/llaahi Cabdi uu u tanaasulay Maxamuud Siraaji si xiligAan wixii ka dambeeya uu u noqdo lahaa Xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka Soomaaliya.
Xubintii Xildhibaanimo ee uu ka geeriyooday Marxuum Cabaas Siraaji oo la dilay 3-dii bishii May ee Sanadkii tegay ee 2017 ayaa aheyd mid banaan oo la filayay in doorashada loogu tartamayo ee Beri ka dhacdo Kismaayo basle ay jiri doonin.
Agaasime kuxigeenka Madaxtooyada oo lagu wado in loo magacaabo Safiirka Qatar